Huku mapapiro ane yakabikwa curry, yakapfuma uye iri nyore kugadzirira. | Kicheni Mapepa
Baked curry huku mapapiro
Montse Morote | 13/05/2021 09:00 | Mapinda Anopisa, Nyama Recipes
Baked curry huku mapapiro, imwe nzira yekudya mapapiro, kwandiri ini chinhu chakanakisa nezvehuku. Akanaka sei mapapiro, iwo anotsemuka uye anonaka. Ndine chokwadi chekuti unovadawo !!!
Tinogona kuzvigadzirira nenzira dzakawanda, mumuto, zvakabikwa, zvakanyoroveswa tichivapa iko kunhuvira kwatinoda munzira dzakawanda uye kuvaita vakareruka vanogona kugadzirirwa muchoto.
Curry musanganiswa wezvinonhuwira zvine zvakawanda zvinonaka, yakanakira kupfeka nyama dzakadai sehuku.
Iyi yekubheka iri nyore kugadzirira, ine mashoma uye akapusa zvigadzirwa, iyo curry muto inogadzirirwa ne yogurt uye curry spice. Inofanirwa kwemasikati kana chisvusvuro yemhuri yese.
Nguva yekugadzirira: 40 M
Nguva yakazara: 1 h 30 min
1 kilo yemapapiro
1-2 creamy kana yoghurt yogurt
2 dhizeti spoons curry
Chopped chives kana parsley
Kugadzirira mapapiro ehuku ne curry muchoto, isu tinotanga nekuchenesa mapapiro, uye nekuparadzanisa madhiramu kubva kumapapiro. Tinoisa munyu uye mhiripiri. Isu tinogadzirira muto, mundiro tinoisa iyo yogati, teaspoon yeti chives kana parsley, tinowedzera mashupuni e curry, minced gariki. Isu tinosanganisa zvese zvakanaka.
Wedzera mapapiro ehuku mundiro nemuto wakagadzirwa, paradzira uye sanganisa mapapiro acho zvakanaka. Tinovapfuudza kundiro yekubheka. Tinovarega vachizorora kwekanguva, zvishoma maminitsi makumi matatu.
Isu tinoisa ovhiri ku200ºC, isu tinoisa sosi nemapapiro akabikwa. Isu tinozovashandura kuitira kuti vasvike zvakanaka pese pese. Tichavasiya kusvikira vave ndarama. Inenge maminitsi makumi mana-40.
Kana dzava isu tinoburitsa panze togadzirira kudya !!!
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Mapinda Anopisa » Baked curry huku mapapiro